युगसम्बाद साप्ताहिक - संविधान लेनदेनको वस्तु होइन
Wednesday, 04.08.2020, 04:05am (GMT+5.5) Home Contact
संविधान लेनदेनको वस्तु होइन
Tuesday, 11.18.2014, 03:03pm (GMT+5.5)
संविधानका विवादित विषयमा सहमतिका लागि लेनदेन र मोलमलाई चलिरहेको छ तर कसरी मूल्य निर्धारण हुने हो पत्तो छैन । किनभने सहमति गर्ने भन्दाभन्दै माघ ८ गते आउन ६६ दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि विमतिको पहाड उचाल्ने क्रम टुटेको छैन । संविधानसभा कार्यतालिका अनुसार सहमति नभए प्रक्रियामा जानुपर्ने भए पनि त्यसलाई अघि बढाइएको छैन । लोकतन्त्रको धज्जी उडाउँदै सहमतिको नाममा आआफ्नै अडानको व्यापार भैरहेको छ । त्यसै भएर अब संविधान जारी हुने समय नै अनिश्चित हुन पुगेको छ । भन्न त सबैले अन्य माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने कार्यतालिका परिवर्तन हुँदैन भनिरहेका छन् तर अब त्यो कसरी सम्भव छ ? संविधान जारी हुने गरी के के काम भए भन्दा फिटिक्कै केही पनि भएको छैन । संविधान लेखन कार्यतालिका अनुसार काम भएको भए कार्तिक महिना लाग्नासाथ जनताको हातमा संविधानको पहिलो मस्यौदा पुगिसक्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । यसको एउटै कारण भनेको विगत ६ वर्षदेखि कायम रहेको विवादित विषय नै हो ।
राजनीतिक दलहरूबीच संविधानका विवादित तर अति महत्वपूर्ण विषयमा सहमति हुन नसकेको र लोकतान्त्रिक विधि बमोजिम तय भएको कार्यतालिका अनुसारको प्रक्रियाबाट पनि कुनै टुंगो नलागेको हुँदा संविधानको मस्यौदा नै तयार हुन सकेको छैन । अब मस्यौदा लेख्ने समय, जनताको रायसुझाव लिने समय, त्यसमा पुनः संविधानसभामा छलफल गरी अन्तिम रुप दिने समय अत्यन्त छोटो छ । रातदिन केही नभनी काम गरेर भटाभट सहमति भए मात्र अब निर्धारित समयमा संविधान जारी हुन्छ अन्यथा अघिल्लो संविधानसभाकै जस्तो अन्तिम समयमा आएर कार्यतालिका संशोधन गर्नुको विकल्प रहने छैन तर पनि अहिलेसम्म दलहरूले माघ ८ गतेलाई फरक नपारी अन्य तालिका मात्र बदल्ने बताइरहे पनि कालान्तरमा माघ ८ नै सार्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । नेताहरूले अहिले देखाइरहेको चरित्र पहिलो संविधानसभाकै हो । यस्तै चरित्रले माघ ८ कट्यो भने नेताहरू इतिहासमै सर्वाधिक असफल नेताका रुपमा दरिनेछन् ।
संविधानको मस्यौदा तयार गरी जनताको राय सुझाव लिएर संविधानसभामा गहन छलफल गर्ने समय आइसक्दा समेत विवादमा सहमति खोज्नकै लागि सबै लागिपरेका छन् । अहिले पनि सहमतिका नारा घन्काएर समय खेर फाल्ने काम मात्र भैरहेको छ । संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिले सहमति गर्न नसक्ने, प्रमुख तीन दलले पनि सहमति नगर्ने भएपछि संविधानको मस्यौदा लेख्ने जिम्मेवारी पाएको संविधान मस्यौदा समितिले कामै नपाएर भत्ता मात्र पचाइरहेको छ । त्यसका पाँचवटा उपसमिति पनि रित्तो हात बसिरहेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले मन लगाएर काम गर्ने हो भने सहमति जुट्न पनि गाह्रो छैन । तर यसका लागि आआफ्नो आग्रह र अडान छाडेर सहमतिको नयाँ मिलनबिन्दूको खोजी गर्ने जमर्को भएको छैन । पुरानै अडानका बासी मुद्दाहरूमा जति बहस गरे पनि त्यसबाट रस होइन बिकार मात्र निस्कन्छ भन्ने ख्याल नेताहरूले गर्नु जरुरी छ । संविधान जारी गर्ने उपयुक्त विकल्प र नयाँ बाटो खोज्नैपर्छ । एकोहोरो अडान र दम्भ प्रदलर्शनले मुलुकलाई निकास दिंदैन । सत्तापक्ष प्रक्रियाबाटै संविधान जारी गर्ने र विपक्षी सहमति नभै संविधान जारी हुन नदिने अडानमा रहँदा मुलुकमा नयाँ द्वन्द्व सिर्जनाको खतरा मडारिएको छ । एमाओवादी र मधेशवादीहले सडकको बाटो रोजिसकेका छन् । यस्तो स्थितिमा नेताहरूले संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा आआफ्नो दलको घोषणापत्रमा लेखेको र जनतासामु गरेको प्रतिबद्धता अनुसार माघ ८ गतेभित्रै संविधान जारी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र सो बाध्यता राजनीतिक र नैतिक दुवै भए पनि नेताहरूमा रहेको चरम नैतिक पतनको चरित्रले उनीहरूलाई छुनसक्ने कुनै संकेत छैन ।
सत्तापक्ष र विपक्ष आआफ्नै धुनमा सवार भएर संविधान लेखनकार्य नै ध्रवीकृत हुन पुगेको छ । सहमति वेगरको संविधान नमान्ने भन्ने तर सहमति भने नगर्ने गर्दा मुलुकले कसरी संविधान पाउला ? सहमतिको वातावरण सिर्जना गरेर विवादित विषयहरूको टुंगो लगाउनु सर्वाधिक उत्तम उपाय हो तर त्यसो हुन नसकेमा मुलुकलाई कहिलेसम्म संविधानविहीन बनाएर राख्ने भन्ने अहम् सवाल यहाँ खडा छ । विवादमा सहमति नभए त्यसको टुंगो जनमतबाट लगाउन सकिन्छ । संविधान लेखन कार्यतालिकामा सोही कुरा उल्लेख छ तर त्यसले एउटा ठूलो समूहलाई असन्तुष्ट पार्ने भएकाले सकेसम्म विवादरहित ढंगले समस्याको समाधान गर्ने विकल्पको खोजी अहिलेको आवश्यकता हो ।